दाङमा दैनिक २ सय भन्दा बढी भाइरलका बिरामी अस्पतालमा – Nepal Media
दाङमा दैनिक २ सय भन्दा बढी भाइरलका बिरामी अस्पतालमा
August 25, 2017 Nepal Media Online राष्ट्रिय 0
दाङ, ९ भाद्र २०७४ । दाङमा रुघाखोकी, ज्वरो, टाइफाइड र पखालाका बिरामीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । पछिल्लो समयमा परेको अविरल वर्षासँगै विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्या देखापरेको छ ।
जिल्लामा उपक्षेत्रीय अस्पताल घोराही, अञ्चल अस्पताल तुलसीपुर, देउखुरीको लमही अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र गाउँ गाउँमा रहेका निजी क्लिनिकमा विशेषगरी भाइरल ज्वरोका बिरामी धेरै रहेका छन् । अहिले देखिएको समस्या मौसमी भएको भन्दै राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालका डा. जितनारायण यादवले विशेष ख्याल गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।
हाल दैनिक २ सय भन्दा बढी भाइरलका बिरामीहरु अस्पतालमा आउने गरेको डा. सुबोध शर्माले जानकारी दिनुभएको छ ।
25Read This News:
सिंहदरबार, पद्मकन्या क्याम्पस र सञ्चारग्राममा निःशुल्क इन्टरनेट
हुलास मोटर कम्पनीको नयाँ शोरुम विराटनगरको मुनालपथमा